Kahor Dagaalka Uu Ronaldo Iyo Van Dijk Kula Gali Doono, Lionel Messi Oo Sharraxay Waxa Ay Isaga Uga Dhigan Tahay Abaalmarinta Ballon d’Or - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Kahor Dagaalka Uu Ronaldo Iyo Van Dijk Kula Gali Doono, Lionel Messi...
Kahor Dagaalka Uu Ronaldo Iyo Van Dijk Kula Gali Doono, Lionel Messi Oo Sharraxay Waxa Ay Isaga Uga Dhigan Tahay Abaalmarinta Ballon d’Or
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ka hadlay abaalmarinta Ballon d’Or ee bisha dambe la bixin doono lana filayo inay tartankeeda kama dambaysta ah markale iskugu soo hadhaan Cristiano Ronaldo, Virgil Van Dijk iyo Messi qudhiisa.
Sanadkan ayaa ah mid ka duwan sanadihii hore iyadoo ay adagtahay in la saadaaliyo ciyaartoyga ku guuleysan doona abaalmarinta kaddib markii qaab kala duwan loo hantay abaalmarinihii shaqsiga ahaa ee dhawaan la bixiyay.
Daafaca Liverpool ee Van Dijk ayaa loo doortay xiddigii Yurub ugu fiicnaa ee sanadka halka Messi uu helay The Best oo uu ka guddoomay Fifa taas oo ah sababta adkaynaysa in haatanba si fudud lagu saadaaliyo guuleystaha Ballon d’Or ee sanadka.
Haddaba, Kahor loolanka uu geli doono, Messi oo ka hadlay abaalmarintaa ayaa ku sifeeyay aqoonsi qurux badan oo qofka hela loo aqoonsaday balse sheegay inay ku timaado guulaha wadarta ah ee kooxda lala gaadho.
Leo oo u warramay Otro ayaa yidhi “Waa aqoonsi qurux badan malaha midii iigu cajiibsanayda waxay ahayd midii ugu horreysay (Ee Aan ku guuleystay)”.
“Waa wax ka yimaada wadarta, Adiga oo aan gaadhin dhammaan guulaha wadarta ah ee ay tahay inaynu gaadhno, Anigu maan awoodeen inaan helo abaalmarinahan shaqsiga ah”.
Previous articleWasaaradda Beeraha oo beenisay in cuduro laga helay Galeyda iyo Masagada Dalkeena
Next articleSomalia: Federal Government and UN appeal for funds to assist flood victims